ပို့စ်တင်ချိန် - 4/29/2014 11:09:00 AM
( C O L L O C A T I O N S )
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာတဲ့အခါ စကားလုံးတွဲတွေ (Collocations) တွေကို မဖြစ်မနေ လေ့လာကြရပါမယ်။တစ်ခါက မန္တလေးမှာနေတဲ့ ကျွန်တော့်ညီမ ဖြစ်သူ စိမ်းမို့မို့ က Collocations နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းတွေ မေးခဲ့ဖူးပါ တယ်.။ဒီနေ့တော့ ..အဲဒီအမေးအဖြေလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Collocation နဲ့ Idioms ကွာခြားချက်
စိမ်းမို့မို့။ ။''အစ်ကို collocations ကလည်း Idioms တစ်မျိုးမဟုတ်လား"..။
ကျွန်တော်။ ။''မဟုတ်ဘူး..ငါ့ညီမ။collocations ဆိုတာ မူရင်းစကားလုံးတွေ ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် လုံးလုံးလျားလျားမပျက်စီးပဲ ဘာသာစကားအရ သဘာဝကျကျ တွဲထားတဲ့ စကားလုံးတွဲတွေကို ခေါ်တာ။ ဥပမာ..မြန်မာစကားမှာပဲကြည့်လေ။သမရိုးကျတွဲထားတဲ့ စကားတွေ အများကြီး ရှိတာပဲ။''သေတာ"ချင်းတူပေမယ့်..လူကို ''သေသည်၊ကွယ်လွန် သည်''.လို့သုံးတယ်။ရှင်ဘုရင်ကျတော့ 'နတ်ရွာစံသည်၊' ဘုန်းကြီးကျတော့ 'ပျံလွန်တော်မူသည်'၊ ရဟန္တာကျတော့ 'ပရိနိဗွာန်ပြုသည်'.....စသဖြင့် ဘာသာစကားအရ သဘာဝကျအောင် တွဲပြောကြရတယ်။အလားတူပဲ တိရိစ္ဆာန်ကျတော့ တစ်ကောင်၊ လူကျတော့ တစ်ယောက်၊ဘုန်းကြီးကျတော့ တစ်ပါး..ဒီလို မူသေ တွဲပြောရတဲ့ စကားတွေလည်း ရှိတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။စကားတွဲတွေ အများကြီး ရှိတာပါပဲ။
ဥပမာ..မြန်မာတွေက ကတိတည်တယ်လို့ သုံးတာကို အင်္ဂလိပ်စာကျတော့ ပေးထားတဲ့ကတိကို ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ သဘောနဲ့ keep promise လို့ သုံးတာမျိုးပေါ့။ဒါ collocation ပဲလေ။မြန်မာက ခန္ဒာကိုယ် အအေးဓာတ် အပတ်ခံရတာမျိုးကို အအေးပတ်သည် လို့ သုံးတယ်။အင်္ဂလိပ်ကတော့ အအေးဓာတ်ကို ခန္ဒာကိုယ်က ဖမ်းယူလိုက်တဲ့သဘောနဲ့ catch cold လို့ တွဲပြောကြပါတယ်။
ကျွန်တော့်သားအတွက် မွေးနေ့ပါတီပွဲလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကို “I madeabirthday party for my son,”လို့ ရေးရင် မှားပါတယ်။ “I threwabirthday party for my son.” လို့ ပြောမှ မှန်တယ်။ဒီနေရာမှာ ‘Throw’နဲ့ ‘party’ ဟာ ပုံမှန်အတွဲဖြစ်လို့ Collocation လို့ ခေါ်တယ်။ကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ တွေးပြီး madeaparty လို့ မသုံးရပါဘူး။
နောက်ပြီး "ဟိုတယ်အခန်း" ကို ပြင်သစ်နဲ့ စပိန်လူမျိုးတွေက “the room of the hotel,” လို့ သုံးပြောတတ်ကြတယ်။အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေအတွက်တော့ အဲဒီလိုပြောတာ တော်တော်ကြောင်တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။တကယ့် သဘာဝ ကျကျအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ ပြောချင်ရင် ‘hotel room.’လို့ သုံးပြောရမှာပါ။ဒါဟာ နာမ်+နာမ် စကားလုံးတွဲလေးတွေကအစ သတိပြုရမယ့်ချက်လေးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ မှတ်ရမယ်...စိမ်းမို့ရေ..။။
နောက်ပြီး မြန်မာနဲ့ဆင်တဲ့ အသုံးတစ်ခုကို ပြောပြမယ်။မြန်မာလို ရူးသွားသည် ဆိုတာကို အင်္ဂလိပ်လို go=သွားသည် mad=ရူးသည် နှစ်ခုတွဲပြီး go mad လို့ တွဲသုံးတာမျိုးပေါ့။ go mad ဆိုတာ ရူးသွားသည်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတော့ မူရင်း စကားလုံးတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ် လုံးဝ ပျက်စီးမသွားဘူးလေ။
ဒါမျိုးကို.. collocation လို့ ခေါ်တယ်။
အလားတူပဲ ...အာရုံစူးစိုက်သည် ဆိုတာကို pay attention လို့ပဲ အင်္ဂလိပ် လူမျိုးတွေက တွဲပြောတယ်။အဓိပ္ပါယ်တူတာပဲဆိုပြီး "give attention, တို့ put attention"တို့ သွားမလုပ်ရဘူး။အဲလို စကားတွဲမျိုး အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာ မရှိဘူး။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာ မူသေတွဲသုံးလေ့ရှိတဲ့ Collocation တွေကိုပဲ သုံးရတယ်။ကိုယ့်ဖာသာ စတန့်ထွင်တွဲချင်လို့ မရဘူးနော်။
ဥပမာ..လက်ထပ်တာကို marry ဆိုတာ စိမ်းမို့တို့ သိတယ်။သူမနဲ့ကျွန်တော် လက်ထပ်တယ်ဆိုတာကို I married with her. လို့ ရေးရင်တော့ သွားပြီ။ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးကြားရင်တော့ ရယ်မှာပဲ။ဘာသာစကားအတော်များများမှာ ''..နဲ့(with) လက်ထပ်တယ်"လို့ပဲ ပြောတယ်။"..သို့(to) လက်ထပ်သည်"လို့ မပြောကြဘူးလေ။အင်္ဂလိပ်ကတော့ ..I got married to her.ဆိုပြီး to ၀ိဘတ်နဲ့ သုံးပြောကြတယ်။married to ဆိုမှ မှန်မယ်။ဒါဟာ collocation ပဲပေါ့။
Takeaseat...စတာတွေဟာ collocations လို့ခေါ်တဲ့ စကားလုံးတွဲတွေပဲ ပေါ့။
စိမ်းမို့မို့။ ။ဒါဆို အီဒီယမ်ကျတော့ COLLOCATION နဲ့ ဘာကွာသွားတာလဲ. .အစ်ကို။
ကျွန်တော်။ ။Idioms ကျတော့ မူရင်းစကားလုံးတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ် မပါတော့ပဲ အဓိပ္ပါယ်သစ် ထွက်လာတဲ့ စကားတွဲတွေလို့ ပြောရမှာပေါ့။ဥပမာ.. "it's raining cats and dogs" ဆိုပါတော့။ခွေးနဲ့ကြောင်တွေ ကောင်းကင်ကနေ မိုးရွာသလို ကျလာတာမဟုတ်ဘူး။''မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသည်လို့ အဓိပ္ပါယ် ရတယ်။"ဒီလို စကားလုံးတစ်ခုချင်းစီရဲ့ မူရင်းအဓိပ္ပါယ်မျိုးမဟုတ်ဘဲ သီးခြား ထွက်တဲ့ စကားတွဲတွေကို iDIOMS လို့ ခေါ်တာပေါ့။
A cuppa to go.လက် ဖက်ရည်တစ်ခွက် ပါဆယ်။
Go to it! လုပ်လိုက်စမ်း..စတဲ့ စကားတွေကို ကြည့်လိုက်လေ.။Go ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပျောက်သွားတာတွေ့ရမယ်။ ဒါ.. အီဒီယမ်ပဲပေါ့..။"
သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများ ပိုမိုဖတ်ရှုရန် ===> learn-english
ရန်ကုန်လေဆိပ်နှင့် ဆိပ်ကမ်းများကို ဖောက်ခွဲမှုပြု လ...
သိမ်းဆည်းမြေ ပြန်ရရေး ရွှေလဝင်း လွန်းတင်လုပ်သား တစ်...
အမေရိကန်နှင့် နေတိုးတို့၏ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကြော...
မနေ့က နေ့လည်ဘက်အချိန် ကောင်းကင်ယံတွင် ပန်းကန်ပြားပ...
ယူကရိန်းနှင့်ရုရှား ထောက်ခံသူ ၂ စုကြား ပဋိပက္ခဖြစ်
ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ ပူးေ...
လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေး ဆန္ဒပြ
နှစ်နိုင်ငံ ပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားနေသည့် နယ်မြေတွ...
ယာဉ်မောင်းအိပ်ငိုက်ပြီး အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ လမ်းဘေ...
အင်ဒိုနီးရှား အိမ်အကူကို ညှဉ်းပန်းမှုဖြင့် ဟောင်ကော...
ကားမီးလောင်ရာတွင် ပါသွားသည့် သန်းခေါင်စာရင်း စာရွက...
ခြင်၊ ယင်၊ ပိုးဟတ်တွေကို နေ့စဉ်လိုက်လံနှိမ်နှင်းပြ...
အမြှောက်အပင့် အဖားတွေကြားက သာယာမှုများနဲ့လူ
ဘန်ကောက်တွင် မြန်မာအလုပ်သမား ၁၂ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
လမ်းအကွေ့၌ အရှိန်မထိန်းနိုင်သောယာဉ် တံတားဘောင်အားတ...
မန်နေဂျာ ရာထူးအတွက် လူးဝစ်ဗန်ဂါးကို ပေါင် ၂၅ သန်းတ...
တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆွေးနွေးပွဲ မေလတွင်ြ...
အိမ်နောက်ဖေး မီးဖိုချောင်ထဲက ပစ္စည်းတွေနဲ့ မျက်နှာအ...
ရခိုင်ပြည်နယ် သန်းခေါင်စာရင်း တချို့ ပြန်ကောက်ရေး ...
လန်ဒန်မြို့မှ တောင်းရမ်းစားသောက်သူများ တစ်ပတ်လျှင်...
လင်မယား ၂ ယောက် အိမ်ခွဲနေဖို့ ပြောရာမှ ဇနီးဖြစ်သူ ...
Lazer World ကုမ္ပဏီ မှ တရားစွဲဆိုခြင်း အပေါ် အဆိုတော...
ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝန်းထဲမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ လင်း...
အီရတ်တွင် အသေခံ ဗုံးခွဲ၊ လူ ၃၀ သေဆုံး
အီဂျစ်တွင် လူ ၆၈၃ ဦးကို သေဒဏ်ချမှတ်မှု နိုင်ငံတကာ ...
အီရတ် စစ်သားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ မဲပေးနေစဉ်တွင်...
သက်တော်စောင့်ဟောင်းရဲ့တရားစွဲဆိုမှုကို ခံနေရတဲ့ Rih...
ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ် ဆူးလေရှန်ဂရီလာ အမည်ပြောင်း
အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ် ကြိုးဆွဲချ သေဆုံး
Samsung Galaxy K zoom ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ ဖ...
Selfie အသားပေး 'Superman' ဟန်းဆက်ကို Nokia ထုတ်လုပ...
အင်းလေးကန်အတွင်း ငါးမျိုးစုံ ကောင်ရေ ၁၀ သိန်း ဇိဝိ...
စက်မှု (၁) အဆောက်အအုံ နံရံ ပြိုကျရာမှ သံဃာတစ်ပါး ပျ...
ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ(၇)က တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ အလုံး ၁၀၀ တည...
ချင်းပြည်နယ်မှာ တက္ကသိုလ်ဖွင့်နိုင်ရေး အရှိန်မြှင့်...
ကမ္ဘာ့ အမြန်ဆုံး ဓာတ်လှေကား တရုတ်ပြည်က CTF တာဝါမှာ ...
အမေရိကန်အထူးသံ Andrew O’Brien နဲ့အဖွဲ့ မြန်မာပြည်သ...
အမေရိကန်၏ ဒီမိုကရေစီ သေဆုံးခဲ့ပြီလား
ကန် လေဆင်နှာမောင်းတွေကြောင့် ၁၇ ဦး သေ
Samsung ကယခုနှစ်အတွင်းနောက်ထပ် SmartWatch အသစ်တစ်လ...
SIBT (Macquarie University) မှ ပေးအပ်သော ပညာသင်ဆုက...
Ooredoo နှင့်ပူးပေါင်း၍ Nokia စတင်ဝင်ရောက်လာ
မြန်မာနိုင်ငံ၌ Data Center နှစ်ခု တည်ဆောက်သွားမည်ဟ...
ပထမဆုံး OpenPower ဆာဗာများကို IBM မိတ်ဆက်
မီတာခ တိုးမြှင့် ကောက်ခံသော်လည်း မီးပြတ်တောက်ခြင်း...
အားနည်းချက်များ ပြင်ဆင်ပြီးမှသာ Microsoft IE အသုံး...
Pregnancy and Morning sickness ကိုယ်ဝန်ရှိစ အိပ်ရာ...
DVB - မီဒီယာဥပဒေအတည်မဖြစ်ခင် ကာကွယ်မပေးနိုင်ကြောင...
မြန်မာပြည်ဈေးကွက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ မြန်မာငွေ ၂၁ သိ...
ပြည်ပမှာ မိသားစု ၃ ယောက် ကြော်ငြာသွားရိုက်မယ့် အေ...
လေးလအတွင်း အမြန်လမ်းတွင် သေဆုံးသူ ၆၀ ကျော် အမြန်လမ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခြံရှေ့မှ ရဟန်းတစ်ပါးနှင့် ယောဂ...
ငါးအပုပ်များသယ်ယူစဉ် အသက်ရှူကျပ်၍ ထိုင်းရောက် မြန်...
ပြည်တွင်း ရဟတ်ယာဉ် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ခရီး...
ဟင်္သာတမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာရှစ်ရွာတွင် မိုးသီးကြွေပြီ...
ရာသီဥတုပူပြင်းလွန်း၍ ရာသီဥတုကောင်းလာစေရန် ဖား ၂ ကေ...
ကချင်ပြည်နယ်တွင် လေးလအတွင်း တရားမ၀င်တရုတ်နိုင်ငံသာ...
ရုရှားအပေါ် အမေရိကန်က နောက်ထပ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့
အမျိုးသမီးဖြစ်သူအား ထောင်ဒဏ်(၂၇)နှစ် အမိန့်ချ ပြီး...
ပစ္စတိုတစ်လက်နှင့် မူးယစ်ဆေးပြားများသယ်လာသူ ဒဂုံဧရာ...
အရက်အတူသောက်ရင်း စကားများရန်ဖြစ်ရာက လူသတ်အလောင်းဖေ...
တိုက်ပြိုကျ၍ သေဆုံးသူ ၃ဦးကို နစ်နာကြေးပေးရန် ကုမ္ပ...
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ပြုပြင်ရေး ဗြိတိသျှနည်းပညာနဲ့ လု...
လယ်မြေပြဿနာများ ရှေ့လမကုန် မီ ဖြေရှင်းဖို့ သူရဦးေ...
အိပ်နေစဉ် ဘာလို့ ဘီလူးစီး တာလဲ
မေလ(၁)ရက်တွင် အလုပ်သမားတစ်ထောင် ဆူးလေ၌ ဆန္ဒပြမည်